Kara fun player_1.20.84...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Kara fun player_1.20.84 တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ကာရာအိုကေ ဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေတဲ့ Player လေးပါပဲ...! အရင်လည်းတင်ပေးခဲ့ပြီးသားပါ...! Link တွေပျက်သွားလို့ နောက်ပြီးတောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိလို့ ပြန်၍တင်ပေးလိုက်ရတာပါ...! " ဒီနေရာလေးမှာ " လင့်အဟောင်းလေးကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်...! သုံးရတာ အဆင်ပြေလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...! အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အောက်မှာ Mediafire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
Turn your PC into an interactive karaoke machine with the KaraFun Player free karaoke software for Windows. KaraFun Player offersacomplete solution for playing karaoke at home.
Fun and exciting, it plays nearly every karaoke file: KFN, KAR, CDG, KOK, LRC, AVI, MPEG...
" Kara Fun Player..." ( 5.04 MB )
No Response to "Kara fun player_1.20.84...!"